कुन देशबाट कस्ता खेलाडी आउँदैछन् डीपीएल खेल्न? - खेल - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कुन देशबाट कस्ता खेलाडी आउँदैछन् डीपीएल खेल्न?
यज्ञराज जोशी काठमाडौं चैत ८
प्रतिक्षित नेपाली घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता रुस्लान धनगढी प्रिमियर लिग(डीपीएल)–२ का टोलीहरुले विदेशी खेलाडी अनुबन्धको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्।
सहभागी टोलीले अधिकांश एसोसियट राष्ट्रका खेलाडीहरु ल्याउने तयारी गरेका छन्। डीपीएलको यस संस्करणमा प्रत्येक टोलीले दुई जना विदेशी खेलाडी अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
गत फागुन अन्तिम साता डीपीएलले आइसीसीको मान्यता पाएसँगै विदेशी खेलाडी ल्याउने बाटो खुलेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यान निलम्बनमा रहेका बेला आइसीसीले नै नेपाली क्रिकेट हेरिरहेकाले अन्तराष्ट्रिय खेलाडी ल्याउन आइसीसीको मान्यता लिनु अनिवार्य हुन्छ।
डीपीएलका टोलीहरुले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, हङकङ लगायतका देशहरुबाट खेलाडी भित्र्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताएका छन्।
सम्बन्धित समाचार: डीपीएल-२ लार्इ अाइसीसीको मान्यता
डिफेन्डिङ च्याम्पियन धनगढीले हङकङबाट एक खेलाडी ल्याउने टुंग्याइसकेको छ। अर्का खेलाडीको टुंग्गो एक दुई दिनमै लाग्ने टोली सञ्चालक राजकुमार श्रेष्ठले बताए। ‘हामीले हङकङबाट एक खेलाडीको टुंगो लगाइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘एक अर्का खेलाडी पाकिस्तान वा श्रीलंकाबाट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौं।’
भारत वा बंगलादेशबाट अर्को राम्रो खेलाडी ल्याउने तयारी गरेपनि त्यहाँ ठूला प्रतियोगिता जारी रहेकाले राम्रा खेलाडी उपलब्ध नभएपछि पाकिस्तान र श्रीलंकाको विकल्पमा गएको उनले बताए। खेलाडीहरु भने पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने उनले बताए।
सम्बन्धित समाचार: डीपीएल अक्सनबाट कुन टोलीले कुन खेलाडीलाई कतिमा खरिद गरे? (सूची)
यस्तै साविकको उपविजेता विराटनगर किंग्सले पनि एसोसियट राष्ट्रबाट विदेशी खेलाडीहरु भित्र्याउने तयारी गरेको छ। टोलीका प्रतिनिधि छुम्बी लामाका अनुसार एसोसियट राष्ट्रका खेलाडीहरुसँग कुरा भइरहेको भएपनि टुंग्गो लाग्न अझै बाँकी छ। कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको विराटनगर किंग्सको प्राथमिकतामा हङकङका खेलाडीहरु रहेको बुझिएको छ।
शक्ति गौचन रणनैतिक खेलाडी रहेको रुपेन्देही च्यालेन्जर्सले ओमानबाट एक खेलाडी ल्याउने भएको छ। उसका अर्का खेलाडी भने भारतबाट आउँनेछन्। टोलीका सह–सञ्चालक रोमित बज्राचार्यका अनुसार एसोसियट राष्ट्र ओमानका सुफायन मोहम्मदलाई भित्र्याउने टोलीले अन्तिम तयारी गरेको छ। उनी हार्डहिटर ब्याट्सम्यान रहेको उनले बताए।
यस्तै, भारत कलकत्ताका अर्का ब्याट्सम्यान दीपक प्रसादलाई ल्याउने तयारी भएको उनले बताए। दीपकले कलकत्ताको बेंगाल–११ तथा बेंगाल यू–२३ टोलीबाट खेलिसकेका छन्।
विनोद भण्डारी रणनैतिक खेलाडी रहेका महेन्द्रनगर युनाइटेडले भारत र पाकिस्तानबाट खेलाडी ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ। टोलीका सह सञ्चालक निरज चन्दले खेलाडीहरुसँग कुराकानी अन्तिम चरणमा पुगेको र केही दिनमा पत्रकार सम्मेलन गरि खेलाडीहरु सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए। उनले दुवै खेलाडीहरु ब्याट्सम्यान अलराउण्डरका रुपमा ल्याउन लागेको बताए।
ज्ञानेन्द्र मल्लको अगुवाईमा रहेको काठमाडौं गोंल्डन्सले दुवै खेलाडी भारतबाट ल्याउने तयारी गरेको छ। टोलीका प्रशिक्षक राजु बस्न्यातका अनुसार एक जना इण्डियन प्रिमियर लिग(आइपीएल) खेलिसकेका र अर्का भने भारतको क्लबबाट खेल्ने खेलाडी ल्याउने तयारी गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार: डीपीएल–२ को खेलतालिका सार्वजनिक, उद्घाटन खेलमा धनगढी र काठमाडौं भिड्ने
सीवाईसी अत्तरियाले पनि दुवै खेलाडी भारतबाट ल्याउने टुंग्गाइसकेको छ। आफूहरुले भारतका क्लब स्तरिय खेलाडीहरु ल्याउन लागेको र चाडैं पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गर्ने सञ्चालक सिवाईसी अत्तरियाका अध्यक्ष नरबहादुर राईले जानकारी दिए।
देशकै सर्वाधिक पुरस्कार राशीको रुस्लान डीपीएल–२ आगामी चैत्र १७ गतेदेखि धनगढीमा सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिताको विजेताले २५ लाख तथा उपविजेताले १० लाख पुरस्कार पाउनेछन्। यसअघि प्रतियोगिताको खेलतालिका पनि सार्वजनिक भइसकेको छ। उद्घाटन खेलमा टीम चौराह धनगढी र काठमाडौं गोल्डन्स आमने सामने हुँदैछन्।
प्रकाशित ८ चैत २०७४, बिहिबार | 2018-03-22 13:58:26